Bogga Wikipedia oo Turkiga ku dacweeyay maxkamadda Xuquuqda Aadanaha Qaaradda Yurub
Mogadishu - 23:11:46
Thursday May 23, 2019 - 21:32:57 in Wararka by Super Admin
Hay’adda maamusha bogga caalamiga ah ee macluumadka lagu keydiyo ee ‘Wikipedia’ ayaa waddanka Turkiga kaga dacwootay maxkamadda Xuquuqda Aadanaha Qaaradda Yurub, kaddib markii Turkigu xireen boggaasi.
Wikipedia oo ah hay’ad aan faa’iido doon ahayn ayaa waxay ku qasbanaatay in ay u dacwooto maxkamadda Xuquuqda Aadanaha Yurub, iyadoo codsanaysa in xayiraadda laga qaado, kaddib markii ay ku guul darreysteen inay qanciyaan maxkamadaha gudaha Turkiga.
Ganaaxan oo Turkigu ay saareen Wikipedia laba sano ka hor ayaa waxa uu ka hor imaanayaa qodobka 10-aad ee xoriyadda hadalka ee Heshiiska Yurub.
Arrinta la isku qabsaday ayaa ka dhalatay laba bog oo Af-Ingiriis ku qoran oo lagu soo bandhigay Wikipedia, kuwaas oo ku saabsan Argagixisada ay hoyga siiso dowladdu iyo dagaalka ka socda Suuriya, labadaas oo ay Turkidu aaminsan yihiin in ay xiriir la leeyihiin dhaq dhaqaaqyo argagixiso.
Stephen LaPorte oo ah maamulaha Wikipedia ayaa sheegay in xukuumadda Turkigu ay ka codsatay in labadaas bog hawada laga saaro iyagoo aan u sharxin sababta.
Waxay ahayd sanadkii 2017 waxaana xilligaasi ay Wikipedia ku adkeysatay in ay ku taagan tahay sharci oo aysan labadaas bog ka saareyn hawada, laakiin Ankara ayaa gebi ahaanba hawada ka saartay bogga Wikipedia.
Haatan Boggan caanka ah ee Wikipedia ayaa waxa uu isku dayayaa in uu ku guuleysto in uu hawada ku soo laabto, waxaana sidan oo kale boggani laga xanibay waddanka Shiinaha.